Nagu saabsan - Changzhou Sunrise Steel Ball Co., Ltd.
Shirkadda kubbadda biraha qorraxdu ka soo baxdo waxaa la aasaasay 1992. Waxaan ku takhasusay soo saarista kubbadda birta ah iyo isku-dhafka cilmi-baarista iyo ganacsiga isku-dhafan.
Sannado badan, oo ku saleysan aasaaska Machadka Kubadda Birta ee wujin, waxaan si aan kala joogsi lahayn nafteena ugu dadaalnaa cilmi baarista iyo horumarinta farsamada been abuurka ee birta birta ah waxaanna inta badan soo saarnaa kubbadaha birta ah sida kubbadaha birta ah ee chrome (aisi52100), kubbadaha birta birta ah (aisi1015) kubbadaha (aisi304.316.420.440c) .Kubadahaani waxaa si ballaaran loogu adeegsadaa gawaarida gawaarida, qalabka korontada, tareenka hogaamiya iyo wixii la mid ah
Sanadihii la soo dhaafay, Waxaa naga go'an in aan baaritaanka iyo horumarinta farsamada kubbadda soo saarka birta ee ku saleysan Machadka Cilmi-baarista Kubadda Birta Wujin. Waxay inta badan soo saartaa 1-16mm steel chromium (aisi52100), oo leh kubad bir ah, birta kaarboonka (aisi1015.1045.1085), kubbadda birta ahama (aisi304.316.420.440c), kubbadda birta ee birta ah, kubbadda naxaasta ah iyo kubbadaha kale ee birta ah. Waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa jihada, gawaarida, aaladaha korantada, biraha hagaha, baakada kubbadda cagta iyo alaabada kale. Waxaa si qoto dheer u aaminsan yahay oo jecel macaamiisha gudaha iyo dibaddaba. Isla mar ahaantaana, waxay sidoo kale soo saartaa kubbadda suugada duuleysa iyo isticmaalka kubbadda birta u qaabeysan oo gaar ah.
Habka Daaweynta Kuleylka Gaarka ah
Soosaaray tikniyoolajiyad daweynta kuleylka isku dhafan oo gaar ah, laga bilaabo sawirka siligga, birta qabow, kubbadda siman, daaweynta kuleylka, shiidi, dhammeynta, nadiifinta, nadiifinta kormeerka, baakadaha, iyo taxanaha geeddi-socodka ee alaabooyinka dhammeeyey ilaa iibinta kubbadda la dhammeeyay.
Qalabka Imtixaanka Sare
Waxay tijaabin kartaa dhammaan noocyada walxaha kiimikada, aaladaha farsamada iyo abaabulka gudaha iyadoo la raacayo heerka 'ISO17025'. Hubso in waaxda hubinta tayada ay kaheli karto xaqiijinta xog sax ah oo sax ah geedi socodka wax soo saarka oo dhan alaabada ceyriinka ah ee geleysa warshada ilaa gaarsiinta alaabada, ayna siiso tixraac joogto ah xog ururin waaxda farsamada iyo macaamiisha cilmi baarista iyo horumarinta qalabka cusub. iyo habab cusub.
Khadadka Waxsoosaarka Kubadda Dhamaystiran
Khadkeena 4-da wax soo saar ee kubada birta ah dhamaanteed waxaa gacanta ku haya kombiyuutarka. Sababtoo ah hoos u dhaca weyn ee faragelinta gacanta iyo wareejinta nidaamka, tayada wax soo saarku waa mid aad u deggan xitaa qaybaha kala duwan. Adeegsiga alaabtayada ayaa sifiican ula kulmi kara shuruudahaaga.
Faahfaahinta Nidaamka Tayada
Nidaam maamul oo aad loo aqoonsan yahay, waxaan ka gudubnay ku dhowaad 30 shahaadooyin caalami ah iyo kuwa warshadeed, sida ISO9001, NQA ISO14001, OHSAS18001, BV, iwm; isla mar ahaantaana, nidaamka xakamaynta tayada alaabooyinkeenna kala duwan ayaa si adag dib loogu eegay shirkadda Siemens, GE iyo 500 oo shirkadood.
3mm Kubadda Maarta ah, Kubbad naxaas ah, Kubad Naxaas adag, Kubad Naxaas adag, 3mm Kubadda Maxaas, Ball Ss304,